Ini ndinofanira Kugonesa Wi-Fi Kufona Pane Yangu iPhone? Ehe! Heino Chikonzero. - Iphone
sei kubvisa kuongorora kunodiwa pane iphone
auto chaiyo pane iphone 6
zvekuita kana iphone yako ikapunzika
Ini ndinofanira Kugonesa Wi-Fi Kufona Pane Yangu iPhone? Ehe! Heino Chikonzero.
Iwe unoziva chii Wi-Fi. Iwe zvirokwazvo ziva chinonzi kudana. Kana usina chokwadi kuti chii Kufona kweWi-Fi ndizvo, hausi wega. Kufona kweWi-Fi kwakatangwa neAT & T, uye vamwe vatakuri vachakurumidza kutevera. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura chinonzi Wi-Fi chii , nei ndichifunga kuti unofanirwa kugonesa kufona kweWi-Fi pane yako iPhone, uye zvimwe zvinhu zvakakosha kuti urambe uchifunga sezvo iwe uchishandisa Wi-Fi kudana kuenda kumberi.
Chii chiri Wi-Fi Kufona?
Kufona kweWi-Fi kunoshandisa yako Wi-Fi kubatana kuti ufone pamusoro peinternet, panzvimbo yenetiweki yesero shongwe inochengetedzwa neyako isina waya inotakura.
Muchikamu chinotevera, ini ndinotsanangura nzira yatakatora kuti tibve kubva kunharembozha kuenda kuWi-Fi kufona, uye kuti tekinoroji iri seri kwekufona yakashanduka sei mumakore mashoma apfuura. Zvinonakidza kwandiri, asi handingagumbuke kana iwe uchida kusvetuka chaipo kuchikamu chiri pamusoro maitiro ekumisikidza Wi-Fi kufona pane yako iPhone .
Matanho Akatungamira KuWi-Fi Kufona
Pandakatengesa maPhones eApple, ndaiwanzo kuudza vatengi kuti, “Mafoni uye nharembozha yako isina waya kune internet ndizvo kuparadzaniswa zvachose . Ivo vanoshandisa maina akasiyana uye vanobatana pamasaini akasiyana. ”
Uye izvo hazvisisiri chokwadi.
Iyo tekinoroji yekumashure kwekufona haina kuchinja kwemakore nekuti zvaisafanira kudaro. Vanhu vaishandisa zvakanyanya data , isingaiti mafoni akawanda, saka vatakuri vasina waya vakatarisa pahunhu hweinternet yekubatanidza.
Funga nezvazvo. Yese yeasina waya anotakura TV kushambadzira kwemakore akati wandei apfuura akatarisa kutenderedzwa imwechete: Inokurumidza, inovimbika internet. Vatakuri vasina waya vanokutengesa pane zvavari kudira mari mukati.
Sei vanhu vasina kumira ndokuti, 'Hei, iro izwi rehunhu pane yangu iPhone kunhuwa ! ” Yakanga isiri iPhones chete - yaive zvese Nharembozha. Kwemakore, isu tave tichifambisa CD-mhando mimhanzi pane edu maPhones. Saka nei mazwi evatinoda achirira senge vari kuuya kuburikidza neAM radio?
Apple Inoputika Vatakuri 'Bubble
Apple yakaburitsa FaceTime Audio muna 2013, iyo kekutanga yakapa vashandisi ve iPhone kugona kusarudza sei ivo vaida kufonera-chete mafoni muPhone app. Ivo vaigona kushandisa netiweki yesero shongwe (inonzi Kufona kwezwi muApple app) kana kushandisa yavo Wi-Fi kana nharembozha yekubatanidza kufona pafoni, chinhu chakadaidzwa naApple FaceTime Audio .
Apple zvirokwazvo yakanga isiri iyo yekutanga kuita izvi. Skype, Cisco, uye mamwe makambani mazhinji anga achishandisa internet kuita mafoni emhando yepamusoro kwemakore, asi hapana kana mumwe wavo aigona kuita zvakaitwa naApple: Vanoisa tekinoroji yekare uye tekinoroji nyowani padivi, uye vanhu vakashamiswa nemusiyano.
Chero ani zvake akamboita FaceTime Audio foni kufona anoziva chinhu chimwe ipapo: Runhare runosheedzera ruzha zvakawanda zvirinani.
Asi FaceTime Audio haina kusakwana kwayo. Izvo zvinongoshanda chete pakati peApple zvishandiso, ingoro uye mafoni anowanzo kuputsika, uye inoshandisa yako nhare yedhata yekubatanidza kana iwe usiri paWi-Fi, iyo inogona kudya kuburikidza neyako cellular data chirongwa.
Yekutanga Nhanho Yakakura: LTE Inzwi (kana HD Izwi, kana Yepamberi Kufona, kana Izwi Pamusoro peLTE)
Pakaburitswa iyo iPhone 6, Verizon, AT & T, nevamwe vatakuri vakaunza LTE Voice, iyo yaimiririra shanduko yakakosha munzira yatinofona nayo. Panzvimbo pekushandisa ekare maseru enzwi-chete mabhendi kufona, iPhones dzaive dzave kugona kushandisa yavo LTE dhata yekubatanidza kufonera pafoni.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Apple, AT & T, uye Verizon havana kukwanisa kubvumirana pane izvo zvinodaidzwa kuti tekinoroji iyi. Apple inoidaidza kuti Voice pamusoro peLTE (kana VoLTE), AT & T inoidaidza kuti HD Voice, uye Verizon inoidaidza kuti Advanced Calling kana HD Inzwi. Hazvina mhosva kuti ndeipi nguva yaunoona, ese anoreva zvakafanana .
Ndinoyeuka nguva yekutanga yandakataura neshamwari yangu David Brooke ndichishandisa LTE Voice. Zvekare, mutsauko weiyo yekufona-mhando yaive kushamisika . Akanga achangobva kutenga nyowani Samsung Galaxy, uye yangu iPhone 6 yaingova nemwedzi mishoma. Zvaiita kunge takamira mukamuri imwechete. Uye isu tanga tisina kuita chero chakakosha - zvakangoshanda.
sei ndisingakwanise kutumira mifananidzo
Iwe unogona kunge wakamboona izvi futi. Kana iyo foni iwe yaunosheedzera kune vamwe vanhu yakajeka-yakajeka uye vamwe vasina, ikozvino unoziva nei: Uri kutaura nevamwe vanhu vachishandisa LTE Voice.
LTE izwi rinonzwika zvakanyanya nani kupfuura echinyakare cellular tekinoroji nekuti inoshandisa tekinoroji iyo isina waya inotakura have yanga ichisimudzira kwemakore akati wandei apfuura: Yako iPhone yekubatana kune internet.
Izwi reLTE rakauya nekukanganisa kumwe kukuru: Kushaikwa kwekuvhara. Kunyangwe hazvo kufukidzwa kweLTE kwawedzera zvakanyanya pamusoro pemakore mashoma apfuura, ichiri chisiri senge yakawanda-inowanikwa se3G uye ekare data network. Kunze kwekunge mapato ese ari munzvimbo ine LTE izwi kufukidza, mafoni anobatanidza achishandisa echinyakare maseru network.
LTE Inzwi, Sangana Neshamwari Yako Nyowani Shamwari: Wi-Fi Kufona.
Kufona kweWi-Fi kunowedzera nzvimbo yekuvhara yeLTE Izwi nekusanganisira netiweki dzeWi-Fi. Rangarira, LTE Inzwi inovandudza mhando yekufona nekushandisa yako iPhone internet internet kufona, panzvimbo yeyakajairwa maseru enzwi network. Sezvo Wi-Fi ichibatanidza yako iPhone kune internet, inhanho inotevera nhanho yekuti LTE neWi-Fi vashande pamwe chete.
Nekufona kweWi-Fi yakavhurwa, yega yega netiweki yeWi-Fi yako iPhone inosangana kuita senge mini cell tower. Kufona kweWi-Fi kunokutendera kuti ufonere zvemhando yepamusoro kuvanhu vane LTE data kufukidza kana vanobatana neWi-Fi network.
Ichi chi kunyanya Nhau dzakanaka kune vanhu vane mashoma maseru ekugamuchirwa kumba. Kana vane Wi-Fi, vanogona kupfuura nharembozha uye vofona vachishandisa yavo yeWi-Fi internet kubatana, chero bedzi rimwe bato rakabatana neWi-Fi kana LTE, futi.
Muchidimbu, Wi-Fi Kufona uye LTE Izwi zvese zvinoshandisa yako iPhone kubatana kune internet kuita yemhando yepamusoro mafoni - mutsauko chete sei vanobatana neinternet. LTE Izwi rinoshandisa yako iPhone's cellular data kubatanidza kune internet iyo yaunotenga kubva kune yako isina waya inotakura, uye Wi-Fi Kufona inoshandisa tambo kana fiber internet kubatana iwe yaunobhadhara kumba kana kushandisa kuStarbucks.
Maitiro Ekumisikidza Iyo Wi-Fi Kufona Pa iPhone
Kana kufona kweWi-Fi kukawanika pane yako iPhone, pop-up inooneka inoti 'Gonesa Kufona kweWi-Fi?' , uye iwe uchave unokwanisa kusarudza Kanzura kana Gonesa . Chirevo pasi pezita racho chinoita pfungwa mbiri huru:
Kana iwe ukabatanidza kune chero netiweki yeWi-Fi, yako iPhone inotumira nzvimbo yako kune yako isina waya inotakura kuitira kuti vakwanise kubhadharisa iwe kune dzimwe nyika mitengo yekufona, kunyangwe iwe usiri kushandisa epasi rese masero eshongwe. Mira, chii?
Kune mapfupi kodhi kodhi (iwo manhamba mana kana mashanu manhamba aunogona kufonera kana kutumira mameseji), nzvimbo yako inotumirwa pamwe chete nekufona / zvinyorwa nekuti iyo kambani muridzi 46645 muUS (GOOGL) inogona kunge yakasiyana nekambani ine 46645 in Lichtenstein.
Iwe unogona zvakare kuvhura yeWi-Fi kufona chero nguva nekuenda ku Zvirongwa -> Runhare -> Kufona kweWi-Fi uye nekukanya switch pedyo ne Wi-Fi Kufona Pane Iyi iPhone .
Paunoseta kufona kweWi-Fi kekutanga, unozotambirwa nechiratidziro chinoti, 'NeWi-Fi Kufona, unogona kutaura nekutumira mameseji munzvimbo dzisina kufukidzwa nharembozha kana isingawanikwe.' Tinya Enderera .
Kufona kweWi-Fi: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva
Tevere, unokwaziswa neakanaka kudhinda. Ini ndakazvidhonzera mune aya akakosha mapoinzi:
Kufona kweWi-Fi kunoshandira mafoni ezwi uye mameseji.
Zvekufona kweWi-Fi kuti zvishande, unofanirwa kuve unobatana neWi-Fi uye rimwe bato rinofanira kuve rakabatana neWi-Fi kana LTE. Kana chimwe chidimbu chisipo, iyo yekufona inoshandisa ekare maseru mabhendi.
Kana iwe uchifamba mhiri kwemakungwa, unenge uchibhadhariswa mwero wakaenzana wepasi rose yeWi-Fi inodaidza sezvaungave iwe kana ukashandisa kune dzimwe nyika maseru enhare.
Kana iwe ukadhaya 911, yako iPhone ichaedza kutumira nzvimbo yako kunzvimbo yekufona uchishandisa GPS. Kana GPS isipo, 911 dispatcher ichagamuchira kero yaunosarudza kana iwe uchigonesa kufona kweWi-Fi.
Kana iwe uchinetseka kurara, heano masikirini echinyorwa chakanaka.
Yekupedzisira Nhanho: Kumisikidza Yako 911 Kero
Rangarira, kana yako iPhone unokwanisa tumira nzvimbo yako uchishandisa GPS kana imwe nzira ye otomatiki nzvimbo masevhisi, ichagara ichiita izvozvo pamberi inotumira kero yawakaisa pano.
Wi-Fi Kufona: Yakagoneswa!
Mushure mekupedza chikamu chekumisikidza yako 911 Kero, iwe uchaona meseji inoti 'Wi-Fi Calling inofanira kuwanikwa mumaminetsi mashoma.' Iwe wakanaka kuenda!
Takataura nezve zvakawanda muchinyorwa chino. Takatanga nekukurukura kuti nharembozha dzakachinja sei kuita krisimasi-yakajeka izwi rekufona kwanhasi, uyezve isu tinopa njiva munzira yekumisikidza Wi-Fi kufona pane yako iPhone - isu takatoputsa iyo yakanaka kudhinda. Ndinoda kunzwa zviitiko zvako nekumisikidza Wi-Fi kufona pane yako iPhone.
Kutenda zvakanyanya pakuverenga, uye yeuka Kuibhadhara Pamberi,